अमेजन प्राइम डेमा लगातार गल्तीहरू क्यामेराहरू दिन्छन् क्रिएटिव अनलाइन
यदि तपाईं दिन पहिले अमेजन प्राइममा सावधान हुनुहुन्थ्यो भने, हुनसक्छ तपाईंले क्यामेरा हराउनु भयो १$,००० को मूल्य छ र केहि १०० भन्दा कममा प्राप्त भयो।
अर्को शब्दमा, हामी छुटको बारेमा कुरा गर्दैछौं .99,3 XNUMX..XNUMX% एक प्रीमियम क्यामेराको लागि भाग्यशाली व्यक्तिहरूको लागि उच्च सम्झौताको पूर्ण सौदा भयो। त्यस दिनको लागि अमेजनबाट केहि चोलोजोहरू जुन हामी केही यूरो भन्दा बढी बचत गर्नको लागि धेरै प्रासंगिक प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्षम भएका छौं।
त्यसैले प्राइम डे हुन्छ बर्षको एक पटकमा त्यो उच्च-लागतको उत्पादन प्राप्त गर्न, ब्ल्याक फ्राइडे वा PcComponentes दिनको साथ हुन्छ। के सफल भएको छ त्यो भाग्यशाली व्यक्तिहरूको लागि हो जुन त्यो उच्च प्रदर्शन क्यामेरा किन्न सक्षम छन्।
मूल्यमा त्रुटि पहिले फेला पर्‍यो सोनी अल्फा a6000 र १--16० मिमी ब्याचमा त्यो reduced 94,50० को सट्टामा।। .. .० मा सिमित भएको थियो। तर यो यो हो कि केही भाग्यशाली व्यक्ति क्यानन EF mm०० मिमीf/ .550.LL IS खरीद गर्न सक्षम छन्, जसको सामान्यतया $ १,800,००० खर्च हुन्छ, १०० भन्दा कममा।
तिनीहरूले एक टिप्पणी पनि छोडे "LOL" को साथ र रद्दको लागि प्रतीक्षा गर्दै 99,3 XNUMX. discount% छुट। यो स्पष्ट छ कि कसैले अमेजनमा उनीहरूको स्टोरको मूल्यहरू बढाउँदै एक्सेलमा हात हटायो।
हामी सोच्न सक्छौं त्यो त्रुटि अमेजनले उठाउँदछ र अन्तमा यो पठाइने छैन, तर केहि केसहरूमा यो त्यस्तो भएको थियो र यो उनीहरूको अधिकतम आश्चर्यमा खरीदकर्तामा पुगेको छ।
त्यसैले तपाइँ अर्को अमेजन प्राइम डे को लागी थाहा छअन्य अफरहरूको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस् किनकि केहि त्यस्तो बौलाहा छूट बोक्न सक्छ कि, गल्तिले भए पनि, सबैको लागि उपलब्ध थियो। कस्तो दुखको कुरा यो भाग मा यो देखेको छैन। याद नगर्नुहोस् अमेजनको सब भन्दा बेच्ने उत्पादनहरु मध्ये एक.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्राइम डेमा अमेजनद्वारा ठूलो गल्ती लगभग $ १,13.000,००० क्यामेरा प्रदान गर्न